ယောင်းတို့မမေအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသင့်တဲ့ skincare ပစ္စည်း (၄) မျိုး - For her Myanmar
ယောင်းတို့မမေအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသင့်တဲ့ skincare ပစ္စည်း (၄) မျိုး
ယောင်းတို့ရေ … ဒီမေလထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားနေ့လေးတစ်နေ့ရှိတာ မှတ်မိကြရဲ့လား ? ဒီနေ့လေးကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး … မေလ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ “အမေများနေ့” ပါ။ ဒီလိုနေ့မျိုးလေးမှာ ယောင်းရဲ့ မေမေကို ကိုယ်ရတဲ့လစာလေးနဲ့ ဘာလေးများလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားဖူးကြလား ? Stella ကတော့ အလှကြိုက်တဲ့မေမေတွေ သဘောအကျကြီးကျသွားစေမယ့် Skincare လေးတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ တင်ပြပေးလိုက်ပါပြီ။
Serum တွေက skincare တွေထဲမှာ အထိရောက်ဆုံးပါ။ မေမေတို့အတွက် အိုမင်းရင့်ရော်တာနဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို နှေးကွေးစေဖို့ဆိုရင် ဗီတာမင်စီ (Vitamin C) ပါတဲ့ serum တွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Hyaluronic acid ပါတဲ့ serum တွေကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့် အသားအရေမွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
(၂) Eye cream
အမျိုးသမီးတွေက အသက် (၂၅) နှစ်ကျော်လာတာနဲ့ eye cream ကို သုံးကိုသုံးပေးသင့်ပြီဆိုတာ ယောင်းသိရဲ့လား ? ယောင်းရဲ့ မေမေကို မျက်ကွင်းညိုတာတွေ လျှော့ချပေးပြီး မျက်လုံးအောက်က အရေးအကြောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ eye cream ကောင်းကောင်းလေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင် သူ(မ)အတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်နော်။
ယောင်းရဲ့ မေမေအမြဲလိုလို အရွယ်တင်နုပျိုနေစေဖို့ moisturizer က မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ကော်လဂျင်က လူကိုနုပျိုစေတဲ့ဓာတ်ဆိုတာတော့ ယောင်းတို့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အမျှ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကော်လဂျင်ဓာတ်တွေ နည်းပါးလာတာမို့ Moisturizer ထဲမှာဆိုရင် ကော်လဂျင် (collagen)၊ AHA/BHA တို့ပါတဲ့ moisturizer တွေက ယောင်းမေမေအတွက် အကောင်းဆုံးပါ။
(၄) Body lotion
Stella ကြည့်ရသလောက်တော့ မေမေတွေက သူတို့တစ်ကိုယ်လုံးမွှေးကြိုင်နေတာကို သဘောကျကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် Stella ကတော့ မေမေ့ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆို ရေဓာတ်များများပါပြီး luxury ဆန်တဲ့အနံ့မျိုးနဲ့ body lotion တွေ ပေးဖြစ်တာများတယ်။ မေမေလည်းသဘောကျ ကိုယ်လည်း မေမေ့နားကပ်ရင် မွှေးနေတာပေါ့ 😛
ကဲ … skincare တွေသာ မေမေ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင် အမေက ကိုယ့်ထက်ပိုနုနေလို့ အမေနဲ့သမီးညီအစ်မလိုပဲလို့ ပြောခံနေရတော့မှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ မေမေ့အတွက်ဆိုတော့ တန်ပါတယ်နော် …
ယောငျးတို့ရေ … ဒီမလေထဲမှာ ထူးထူးခွားခွားနလေ့ေးတဈနရှေိ့တာ မှတျမိကွရဲ့လား ? ဒီနလေ့ေးကတော့ တခွားမဟုတျပါဘူး … မလေ (၁၂) ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ “အမမြေားနေ့” ပါ။ ဒီလိုနမြေို့းလေးမှာ ယောငျးရဲ့ မမေကေို ကိုယျရတဲ့လစာလေးနဲ့ ဘာလေးမြားလကျဆောငျပေးရငျ ကောငျးမလဲလို့ စဉျးစားဖူးကွလား ? Stella ကတော့ အလှကွိုကျတဲ့မမေတှေေ သဘောအကကြွီးကသြှားစမေယျ့ Skincare လေးတှကေို တဈစုတဈစညျးထဲ တငျပွပေးလိုကျပါပွီ။
Serum တှကေ skincare တှထေဲမှာ အထိရောကျဆုံးပါ။ မမေတေို့အတှကျ အိုမငျးရငျ့ရျောတာနဲ့ အရေးအကွောငျးတှကေို နှေးကှေးစဖေို့ဆိုရငျ ဗီတာမငျစီ (Vitamin C) ပါတဲ့ serum တှကေ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ Hyaluronic acid ပါတဲ့ serum တှကေတော့ နရေောငျခွညျနဲ့ လထေုညဈညမျးခွငျးကွောငျ့ အသားအရမှေဲခွောကျခွောကျဖွဈတာကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှကေ အသကျ (၂၅) နှဈကြျောလာတာနဲ့ eye cream ကို သုံးကိုသုံးပေးသငျ့ပွီဆိုတာ ယောငျးသိရဲ့လား ? ယောငျးရဲ့ မမေကေို မကျြကှငျးညိုတာတှေ လြှော့ခပြေးပွီး မကျြလုံးအောကျက အရေးအကွောငျးတှကေို ပြောကျကငျးစတေဲ့ eye cream ကောငျးကောငျးလေး လကျဆောငျပေးလိုကျရငျ သူ(မ)အတှကျ အသုံးတညျ့မယျလို့ အာမခံပါတယျနျော။
ယောငျးရဲ့ မမေအေမွဲလိုလို အရှယျတငျနုပြိုနစေဖေို့ moisturizer က မရှိမဖွဈပါပဲ။ ကျောလဂငျြက လူကိုနုပြိုစတေဲ့ဓာတျဆိုတာတော့ ယောငျးတို့သိကွမယျထငျပါတယျ။ အသကျအရှယျရလာတဲ့အမြှ ကိုယျခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ ကျောလဂငျြဓာတျတှေ နညျးပါးလာတာမို့ Moisturizer ထဲမှာဆိုရငျ ကျောလဂငျြ (collagen)၊ AHA/BHA တို့ပါတဲ့ moisturizer တှကေ ယောငျးမမေအေတှကျ အကောငျးဆုံးပါ။
Stella ကွညျ့ရသလောကျတော့ မမေတှေကေ သူတို့တဈကိုယျလုံးမှေးကွိုငျနတောကို သဘောကကြွတာမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Stella ကတော့ မမေကေို့ လကျဆောငျပေးဖို့ဆို ရဓောတျမြားမြားပါပွီး luxury ဆနျတဲ့အနံ့မြိုးနဲ့ body lotion တှေ ပေးဖွဈတာမြားတယျ။ မမေလေညျးသဘောကြ ကိုယျလညျး မမေနေ့ားကပျရငျ မှေးနတောပေါ့ 😛
ကဲ … skincare တှသော မမေအေ့တှကျ လကျဆောငျပေးလိုကျရငျ အမကေ ကိုယျ့ထကျပိုနုနလေို့ အမနေဲ့သမီးညီအဈမလိုပဲလို့ ပွောခံနရေတော့မှာပဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ဘကျက အမွဲရပျတညျပေးခဲ့တဲ့ မမေအေ့တှကျဆိုတော့ တနျပါတယျနျော …
Tags: Beauty, mom, Mother's day, skincare, tips
ဆာရှိမိ (ငါးအသားလွှာ)ကို လတ်၊မလတ် ခွဲခြားနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက်
Stella May 3, 2019